Onyankopɔn Te Sɛn? | Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Otetela Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Russian Sign Language Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Onyankopɔn yɛ honhom, na yɛrentumi mfa yɛn ani nhu no. Ɔsoro ne asase ne nneɛma a ɛwɔ nkwa mu nyinaa, ɔno na ɔbɔe. Onyankopɔn de, ɛnyɛ obi na ɔbɔɔ no; onni mfiase. (Dwom 90:2) Onyankopɔn pɛ sɛ nkurɔfo hwehwɛ no na wohu ne ho nokwasɛm.—Kenkan Asomafo Nnwuma 17:24-27.
Onyankopɔn yɛ obi ankasa a ɔwɔ din, na sɛ yedwinnwen nneɛma a wayɛ ho a, yebetumi ahu ne suban kakra. (Romafo 1:20) Nanso yebetumi ahu Onyankopɔn yiye paa a, gye sɛ yesua n’Asɛm Bible. Ɛma yehu Onyankopɔn yiye, na yehu sɛ ɔyɛ ɔdɔ Nyankopɔn.—Kenkan Dwom 103:7-10.
Sɛn na Onyankopɔn te nka wɔ nsisi ho?
Yɛn Bɔfo Yehowa kyi nsisi, na ne suban no bi na ɔde bɔɔ nnipa. (Deuteronomium 25:16) Ɛno nti na yɛn mu pii kyi nsisi no. Nsisi a ɛwɔ wiase no mfi Onyankopɔn. Onyankopɔn bɔɔ nnipa no, ɔde wɔn pɛ maa wɔn. Nanso nea ɛyɛ yaw ne sɛ, nnipa amfa anyɛ adepa; wɔde sisi wɔn yɔnko nnipa, na ɛma Yehowa di awerɛhow ne komam.—Kenkan Genesis 6:5, 6; Deuteronomium 32:4, 5.
Yehowa dɔ atɛntrenee, na ɔrenhwɛ mma nsisi nkɔ so saa daa. (Dwom 37:28, 29) Bible hyɛ bɔ sɛ ɛrenkyɛ Onyankopɔn beyi nsisi nyinaa afi hɔ.—Kenkan 2 Petro 3:7-9, 13.
Bible hyɛ bɔ sɛ ɛrenkyɛ Onyankopɔn beyi nsisi afi hɔ ama obiara ho atɔ no